Ipolisi Yemeko Ongenakuyinceda ne-coronavirus (COVID-19) – inqaku loncedo
Qaphela: Ukususela nge-31 kaMeyi 2022, siyazihlaziya izinto eziqukiweyo zeCOVID-19 phantsi kwepolisi yemeko ongenakuyinceda:
• Xa kubhukishwe nge-31 kaMeyi 2022 okanye emva koko, ezi meko zingezantsi zinento yokwenza neCOVID-19 ziza kuyekwa ukuqukwa (ngaphandle kwaxa kubhukishe abahlali baseMzantsi Korea). Endaweni yaloo nto, ipolisi yokurhoxa Yombuki Zindwendwe iza kusebenza njengesiqhelo.
• Xa kubhukishwe ngaphambi kwe-31 kaMeyi 2022, iimeko ezinento yokwenza neCOVID-19 ezingezantsi ziza kuqhubeka ziqukiwe.
Ihlaziywe nge-1 Oktobha 2020
NgoMatshi 11, uMbutho Wezempilo Wehlabathi (iWHO) wathi ukuvela kwecoronavirus, eyaziwa ngokuba yiCOVID-19, ngubhubhane wehlabathi lonke. Ukususela ngoko, lo bhubhane uye wanda ngokukhawuleza ibe oorhulumente emhlabeni wonke baye bathatha amanyathelo ngokukhawuleza ukunciphisa ukusasazeka kweCOVID-19.
Ukuze simelane nale meko, siquka nezi meko zilandelayo ezinento yokwenza ne-COVID-19 kwipolisi yethu yemeko ongenakuyinceda ukuze sikhusele intsapho yethu size siyenze ibe noxolo lwengqondo. Nceda ujonge eli phepha ukuze ufumane ezakutshanje ngezinto esiziqukileyo.
Icebiso: Ukuba ulundwendwe, ungafumana iindlela zokurhoxa nezokubuyiselwa imali ngokuya kwiphepha Lohambo uze ukhethe uhambo lwakho—fumana indlela yokuyenza le nto. Ukuba unguMbuki Zindwendwe, uza kufumana inkcazelo kwideshibhodi yakho yokubuka iindwendwe.
Xa kubhukishwe iindawo Nezinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb ngaphambi okanye nge-14 kaMatshi 2020 ibe usuku lokubhalisa xa kufikwa lukwiintsuku eziyi-45 ukususela namhlanje, loo meko iqukiwe kwipolisi ibe kungarhoxiswa ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa. Iindwendwe ezifuna ukurhoxa ziza kuba neendlela zokurhoxa nokubuyiselwa imali ezinokukhetha kuzo ibe Ababuki Zindwendwe bangarhoxa ngaphandle kokubhataliswa okanye kokuchaphazela ukuba yiSuperhost kwabo. UAirbnb uza kubuyisa imali, okanye akhuphe imali enokusetyenziselwa ukuhamba, equka yonke imali ebhatalelwa ukusebenzisa uAirbnb yokubhukisha okurhoxisiweyo okukufanelekelayo ukubuyiselwa imali. Ukuze urhoxe phantsi kwale polisi, kuza kufuneka uveze ubungqina okanye amaxwebhu abonisa ukuba le ibiyimeko ongenakuyinceda.
Ipolisi yokurhoxa yoMbuki Zindwendwe iza kusebenza njengesiqhelo xa kubhukishwe emva kwe-14 kaMatshi 2020, ngaphandle kokuba undwendwe okanye Umbuki Zindwendwe ugula yiCOVID-19.
Ukurhoxa kuza kuhoywa ngokuhambiselana nezinto eziqukiweyo kwipolisi yemeko ongenakuyinceda esebenzayo xa kurhoxwa ibe ukubhukisha obekusele kurhoxisiwe akuzukuhoywa.
Ukuba ukubhukisha sele kuqalile (ukubhalisa xa kufikwa sele kudlulile), le polisi yemeko ongenakuyinceda ayisebenzi.
Kusebenza iipolisi ezahlukileyo ekubhukisheni kwasekuhlaleni kwimimandla yaseTshayina kunye nokubhukisha kweLuxe okanye iLuxury Retreats.
Xa kubhukishwe ngaphambi okanye nge-14 kaMatshi 2020
Xa kubhukishwe iindawo Nezinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb ngaphambi okanye nge-14 kaMatshi 2020 ibe usuku lokubhalisa xa kufikwa lukwiintsuku eziyi-45 ukususela namhlanje, kungarhoxiswa ngaphambi kokubhalisa xa kufikwa. Le nto ithetha ukuba iindwendwe ezirhoxa phantsi kwale polisi ziza kubuyiselwa yonke imali okanye ibe yimali enokusetyenziswa kuhambo elingana nemali eziyibhateleyo (apho imali enokusetyenziswa kuhambo ifumanekayo khona), Ababuki Zindwendwe baza kukwazi ukurhoxa phantsi kwale polisi ngaphandle kokubhataliswa okanye kuchaphazele ukuba yiSuperhost kwabo, ibe uAirbnb uza kuyibuyisela yonke imali yabo okanye ibe yimali enokusetyenziswa kuhambo, equka imali yokusebenzisa uAirbnb.
Xa kubhukishwe iindawo Nezinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb ngaphambi okanye nge-14 kaMatshi 2020, ibe usuku lokubhalisa xa kufikwa lukwiintsuku ezingaphezulu kweziyi-45 ukususela namhlanje okwangoku loo meko ayiqukwanga kwipolisi yemeko ongenakuyinceda yeCOVID-19. Ipolisi yokurhoxa yoMbuki Zindwendwe iza kusebenza njengesiqhelo.
Xa kubhukishwe emva kwe-14 kaMatshi 2020
Kwiindawo Nezinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb okwenziwe emva kwe-14 kaMatshi 2020, ipolisi yokurhoxa yoMbuki Zindwendwe iza kusebenza njengesiqhelo ibe oku kubhukisha akuzukuqukwa kwipolisi yethu yemeko ongenakuyinceda, ngaphandle kokuba undwendwe okanye Umbuki Zindwendwe ugula ngoku yiCOVID-19. Iimeko ezinento yokwenza neCOVID-19 ezingaqukwanga kule polisi ziquka: ukuphazamiseka nokurhoxiswa kwezothutho; amacebiso nemiqathango yohambo; amacebiso ezempilo kunye nokuhlaliswa wedwa; ukutshintshwa komthetho osebenzayo; nezinye iimeko ezigunyaziswe ngurhulumente—njengemiyalelo yokufuduka, ukuvalwa kwemida, ukungavumeleki kokuqesha indawo ixesha elifutshane, kunye nemfuneko yokuhlala endlini.
Ipolisi yethu yemeko ongenakuyinceda yenzelwe ukukhusela iindwendwe Nababuki Zindwendwe kwiimeko ezingalindelekanga ezivela emva kokubhukisha. Emva kokuba kuthwe iCOVID-19 ngubhubhane wehlabathi nguMbutho Wezempilo Wehlabathi, ipolisi yemeko ongenakuyinceda ayizukusebenza ngenxa yokuba iCOVID-19 kunye nomonakalo ewenzayo ayisezozinto zingalindelekanga. Nceda ungalibali ukuyihlolisisa kakuhle ipolisi yokurhoxa yoMbuki Zindwendwe xa ubhukisha uze ucinge ngokukhetha ukubhukisha onokukwazi ukukutshintsha.
Ukuba ulundwendwe, ungafumana iindlela zokurhoxa nokubuyiselwa imali ngokuya kwiphepha Lohambo uze ukhethe uhambo lwakho—funda indlela yokuyenza le nto. Ukuba unguMbuki Zindwendwe, uza kufumana inkcazelo kwideshibhodi yakho yokubuka iindwendwe.
Inkcazelo entsha nezinto eziluncedo ze-coronavirus
Sidibanise amanqaku okunceda intsapho yethu ngeli xesha Kwiziko Lolwazi. Ungafumana inkcazelo yakutshanje ngendlela yethu yokumelana neCOVID-19, ukususela kwiipolisi ezihlaziyiweyo ukuya kutsho kwizixhobo Zababuki Zindwendwe nezeendwendwe.